Korea Atsimo: Esoeso An-tserasera Momba Ny Fitsarana Tranga-na Fikitihana Faritra Saropady · Global Voices teny Malagasy
Korea Atsimo: Esoeso An-tserasera Momba Ny Fitsarana Tranga-na Fikitihana Faritra Saropady
Voadika ny 09 Jolay 2012 4:36 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Filipino, Español, English
Niteraka hanihany sy tebaka maro any amin'ny zareo Koreana Tatsimo ao amin'ny Twitter ny didim-pitsarana momba ny fanohintohinana ny saropady amin'ny vehivavy.
Vehivavy miasa ao amin'ny fivarotana golf no nametraka fitoriana lehilahy mpividy iray ho nikitikitika faritra saro-pady, voalaza ho nikasika sy nanindry “teo amin'ny faritry ny nonony” tamin'ny tanany ka tsy nankasitrahany izany. Nadaboky ny mpitsara Kim ny raharaha [ko] tamin'ny 3 Jolay 2012 tao amin'ny Fitsarana tao amin'ny distrikan'i Daegu tamin'ny filazana fa: “ny faritra nolazain'ny olona niharany dia teo amin'ny taolam-panavy fa tsy tena teo amin'ny faritra saropady” toy ny tratra.
A woman wears a t-shirt against sexual violence during a slutwalk march in London, United Kingdom. Photo by Alex Milan Tracy, copyright (c) Demotix (11/06/2011)Manao akanjo hanoherana ny herisetra fanolanana nandritra ny diabe “slutwalk” tany Londres, UK. Saripika Alex Milan Tracy, nandika (c) Demotix (11/06/2011)
Tsy voatanisa ny fanehoan-kevitra maneso voarain'i Kim Nam-Hoon (@namhoon) mpisiokantsera manana ny lazany ao Korea Atsimo [ko] momba ny fanapahan-kevitry ny fitsarana rehefa avy nisioka izy:
Anjaran'ny mpitsara ankehitriny no manapa-kevitra amin'ny hoe aiza no “faritra saropady”
Mpisera Twitter @taek2_j namaly tamin'ity soratra maneso [ko] ity:
Fantatro izao fa tsy faritra mahataitra eo ambanin'ny taolam-panavy. Ahoana no fomba anapahanareo mpitsara ny faritra saropady amiko.
Izany ve no Midika ve izany fa lazaina ho fikitihana faritra saropady raha toa ka taitra amin'ilay hetsika ilay niharany? Mba hadalàna koa re izany!
Nanampy i @dreamer_sun added [ko]:
Satria angamba tsy faritra mahataitra ny mpitsara ny faritry ny taolam-panavy.
Efa nihoatra ny in-640 no nisy nampita ity hatsikana [ko] nataon'i @Ex_armydoc ity :
Namaritra tamin'ny fomba ofisialy ny fitsarana Koreana fa tsy faritra mahataitra ara-pilàna ny taolam-panavy. Raha mahita olona mahatsapa filàna rehefa kitihana amin'io faritra io ianao, dia tsy ara-dalàna izany. Noho izany atero eny amin'ny mpitandro filaminana akaiky anao izy azafady.
Na izany aza, Mpijery aterineto sasany, nandresy lahatra [ko] fa misy fampahalalam-baovao sasany manitatra sy mandiso hevitra. Nefa nohazavain'i [ko] @aqua7414 ny fepetra tsotra manjaka amina tranga-na fikitihana faritra saro-pady.
Hatramin'ny oviana ny fitsarana no manapa-kevitra amin'izay lazaina ho faritra saro-pady mahataitra eo amin'ny vatana? Raha mahatsapa voatohitohina ny olona iray, niharan'ny fikitikitihana ny faritra saro-pady izy izany. [Raha arahina ny lôjikan'ny fitsarana] dia [azo heverina] ho tsy meloka avokoa ny mpanolana mankafy manokana ny tongotra, na tanana, na ireo mpanolana ankizy – satria tsy mbola maoty manana faritra mahataitra ny ankizy. Mba misaina ry mpitsara rehefa miasa ianareo.
Azia Atsinanana 1 ora izay
Azerbaijan 15 ora izay